WhatsApp kọwara ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ha anabataghị usoro ọrụ ọhụụ | Site na Linux
Na mbido afọ WhatsApp tinyere aka na asịrị n'ihi na ọ mere ka ndị ọrụ mata banyere mmelite ya na ọrụ nke nzuzo na iwu nzuzo ya nke kwesịrị ị bido na February 8, 2021.
N'ihi ya, ọrụ izi ozi ozugbo bụ etiti oke nkatọ na ọkachasị nke mpụga nke ọtụtụ ndị ọrụ gaa na nyiwe ndị ọzọ, dị ka Telegram ma ọ bụ mgbaama.
Ma ọ bụ ya - n'ime mgbanwe nke usoro ọrụ ọhụụ ọhụụ, ndị a metụtara ụzọ WhatsApp si eme data data onye ọrụ, "Otu ụlọ ọrụ nwere ike iji ọrụ ndị a na-akwado Facebook iji chekwaa ma jikwaa mkparịta ụka WhatsApp ha" yana "Otu anyị si esonye na Facebook iji nye njikọta na ngwaahịa ụlọ ọrụ. Facebook azụmahịa ».
Mgbanwe ndị a chọrọ kwe ka WhatsApp soro ndị ụlọ ọrụ Facebook ndị ọzọ kerịta data ndị ọrụ, tinyere ozi ndebanye akaụntụ, nọmba ekwentị, data azụmahịa, ozi ọrụ, mmekọrịta mmekọrịta, ozi gbasara ngwaọrụ mkpanaka, adreesị IP na data anakọtara.
Nke ahụ bụ na ugbu a, WhatsApp na-ekenye ụfọdụ ụdị ozi ya na ndi Facebook. Ozi anyị na ndị ọzọ Facebook jikọrọ gụnyere ozi ndebanye aha (dịka nọmba ekwentị), data azụmahịa, ozi metụtara ọrụ, ozi gbasara otu gị na ndị ọzọ si emekọrịta, ndị ọzọ, gụnyere ụlọ ọrụ,
Agbanyeghị, ịgbaso ịrị elu nke ngwa Telegram na ngwa ngwa izi ozi, nke amụrụ maka nchegbu ọha na eze, WhatsApp gbalịrị ịkwụsị ụjọ.
Izu gara aga, na a blog post, WhatsApp laghachiri ọrụ. Ọ bụ ezie na ọ chetara na ọ nweghị ike ịhụ ozi ma ọ bụ gee ntị na mkparịta ụka nke ndị ọrụ a n'ihi izo ya ezo na njedebe, ngwa izipu ozi ahụ chetakwara na ọ ga-ebipụta ọkwa ọhụrụ na izu ndị na - abịanụ ka ọ kọwaara ndị ọrụ mgbanwe na iwu ohuru ya Nke nzuzo:
“Taa, anyị ga - ekekọrịta atụmatụ anyị etinyere maka etu anyị ga - esi jụọ ndị ọrụ WhatsApp ka ha nyochaa usoro ọrụ na iwu nzuzo anyị. Anyị achọpụtala ọtụtụ ihe ọmụma na-ezighi ezi banyere mmelite a ma nọgide na-eme ike anyị niile iji kpochapụ ọgba aghara ọ bụla.
“Dị ka ihe ncheta, anyị na-ugbu a na-eke ọhụrụ ụzọ ikori na ụlọ ọrụ ma ọ bụ zụta ha na ngwaahịa na WhatsApp, na ojiji nke nke na-anọgide kpamkpam nhọrọ. Ozi nkeonwe ga-ezoro ezo mgbe niile site na otu njedebe ruo na nsọtụ ọzọ. Ya mere, WhatsApp enweghị ike ịgụ ma ọ bụ gee ha ntị.
Anyị chere echiche banyere ihe anyị gaara eme n'ụzọ dị iche na ọnọdụ a. Anyi choro ka onye obula mara ihe banyere ihe nzaba nzuzo nke njedebe na njedebe na ntinye anyi iji chebe nzuzo na nche nke ndi oru anyi. Ugbu a, anyị ji njirimara ọnọdụ anyị kesaa ụkpụrụ na mmelite anyị kpọmkwem n'ime WhatsApp. Anyị ga-eme ọbụna karịa n’ọdịnihu iji hụ na a nụrụ olu anyị nke ọma.
Na post gị, WhatsApp kwuru na n'izu ole na ole sochirinụ, ọ ga-egosi ọkọlọtọ na WhatsApp na ozi ndị ọzọ.
N'ime ya ndị ọrụ nwere ike ịgụ ozi aNa mgbakwunye, agbakwunyere ozi ndị ọzọ iji gbalịa ilebara nsogbu ndị ọrụ anya.
E mesịa Ndị ọrụ ga-amalite ichetara mkpa ọ dị iji nyochaa na ịnakwere mmelite ndị a iji gaa n'ihu na-eji WhatsApp.
“Anyị kwenyere na ọ dị mkpa ka onye ọ bụla mara ka ọ ga - esi kwe omume ka anyị nye WhatsApp n'efu. Kwa ụbọchị, ọtụtụ nde mmadụ na-ebute mkparịta ụka WhatsApp na azụmaahịa n'ihi nnukwu nkasi obi nke ngwa ahụ na-enye ma e jiri ya tụnyere oku ekwentị ma ọ bụ mgbanwe email. Anyị na-ana ụlọ ọrụ na-enye ndị ahịa ọrụ na WhatsApp, ọ bụghị ndị mmadụ n'otu n'otu. Featuresfọdụ atụmatụ ịzụ ahịa gụnyere Facebook, yabụ azụmaahịa nwere ike ijikwa ngwaahịa ha site na ngwa. Anyị na-ebipụta ozi ndị ọzọ gbasara ya ozugbo n'ime WhatsApp ka ndị ọrụ nwee ike ịhọrọ ma ọ bụrụ na ha chọrọ ịmalite mkparịta ụka na ụlọ ọrụ ma ọ bụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » WhatsApp kọwara ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ha anabataghị usoro ọrụ ọhụụ ọhụrụ
Aghọtaghị m ihe ọ bụla
Zaghachi na andradefray001@gmail.com
Friar andrade dijo
Ok m chere na ọ magburu onwe
Zaghachi Fray andrade